Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. ५ सय सीमास्तम्भ गायब – Emountain TV
काठमाडौं, २५ साउन । नेपाल–भारत सीमाका करिब ५ सय स्तम्भ हराएका छन् । नापी विभागले चार वर्ष लगाएर ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म गरेको सीमा–अध्ययनमा यस्तो पाइएको हो ।
महाशाखाका अनुसार २०७१/७२ देखि २०७४/७५ को अवधिमा गरिएको सर्भेमा १ सय १६ सीमास्तम्भ मात्र दुरुस्त अवस्थामा भेटिएका छन् । १ हजार ५ सय ४३ वटाको मर्मतसम्भार गरिएको छ । एउटा मुख्य स्तम्भबाट अर्को स्तम्भको दुरी २ किलोमिटर छ भने सहायक स्तम्भ आवश्यकताका आधारमा राखिने गरिएको छ ।
२०४५ को नेपाल–भारत सम्झौता र २०२१ सालको नापीबाट करिब १२ सय हेक्टर नेपाली भूभाग भारततर्फ पुगेको अनुमान छ । त्यति नै मात्रामा भारतीय भूभाग नेपालतर्फ आएको उताको दाबी छ । २०४५ सालमा सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि पछिको सबैभन्दा पुरानो उपलब्ध नक्साका आधारमा सीमा कायम गर्ने सम्झौता भएको थियो । विसं २०२१/२२ मा सुरु भएको जग्गा नापी कार्यक्रमअन्तर्गत सीमा क्षेत्रमा नापी हुँदाका बखत रहेको हकभोगका आधारमा जग्गाधनीलाई पुर्जा दिइएको छ ।
नेपालमा ६ हजार बढी नदीनाला, खोल्सा, खहरे छन् । जसमा ६० नदी बनेर भारततर्फ बग्छन्, जसमध्ये २० वटाले नेपाल–भारत सीमानाको काम गर्छन् । उदाहरणका लागि कैलालीको मोहना नदीले धेरै स्तम्भ बगाएको छ । उनले कतिपय स्थानमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले समेत नियतवश नै स्तम्भ सारेको पाइएको दाबी गरे । आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छापिएको छ ।